30 नोभेम्बर 2017
अज्ञात के हो?
कसरी अनियमित काम गर्दछ?
अज्ञात प्रमाणीकरण को लाभ:
अज्ञात अपेक्षाकृत नयाँ छ Devops उपकरण कि कठपुतली र महाराज पछि बजारमा पहिले नै खेलाडीहरू स्थापित भएका थिए। आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर र स्वचालन मुद्दाहरू सुल्झाउने यो फरक फरक छ। अननीको मूल लेखकले यो सिर्जना गरे, अवधारणा निर्धारण गर्न इरादा, तपाईंले प्रोग्रामिङ सिक्न आवश्यक पर्दैन। रिमोट सर्भरमा जडान गर्न को लागी व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, अज्ञातले पनि * nix आधारित प्रणाली र winrm (विन्डोज रिमोट व्यवस्थापन) को लागि सञ्झ्याल आधारित प्रणालीहरूको लागि प्रयोग गर्दछ। टी
अज्ञात प्रशिक्षण सरल, सुरुचिपूर्ण, स्केलेबल र सिक्न सजिलो हुनुपर्छ। निर्देशनहरू / चरणहरू / कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ Yamla। कार्य क्रमिक रूपमा निष्पादित गरिएको छ। कार्यमा, हामीले प्रणालीको राज्य घोषणा गर्न आवश्यक छ। Eg: एक प्याकेज भिम स्थापित हुनुपर्छ। यो कसरी स्थापित हुनुपर्छ, यो मोडल द्वारा संभाला / व्यवस्थित गरिएको छ, हामी यसको बारेमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन। यदि त्यो प्याकेज पहिले देखि नै स्थापित छ भने, त्यसपछि अज्ञातले त्यो चरणलाई उपेक्षा गर्नेछ। यो इम्मेपोटेंस को रूपमा भनिन्छ।
YAML, यो एक साधारण पाठ ढाँचा हो, जसले मानिसहरूको साथसाथै मिसिनहरूको लागि पढ्न र लेख्न सजिलो छ। अज्ञात चलाउने जादू केहि केहि हुन्छ जसमा मोड्युल भनिन्छ। कुनै पनि प्रोग्रामिङ भाषामा मोड्युलहरू लेख्न सकिन्छ। अज्ञात एकदम छिटो छ र कुनै एजेन्टलाई लक्षित सर्भरमा स्थापित गर्न आवश्यक छैन। तपाइँ राउटर / स्विच कन्फिगर गर्न अनियमित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको द्वारा समर्थित छ अज्ञात (र यो एउटा सूची हो)।
यदि तपाईलाई अनलाईनमा गहिरो खुम्च्याउन र आफ्नै आफ्नै अनुकूलन मोडल सिर्जना गर्न आवश्यक छ भने मात्र, तपाइँलाई प्रोग्रामिङ भाषा सिक्न वा थाहा पाउन आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण अननीको फाइदाहरू के यो नि: शुल्क र खुल्ला स्रोत हो। यो पाइथन र कुनै पनि जसले पायथन बुझ्न कोड पढ्न र यसको आफ्नै आवश्यकता अनुरूप गर्न आवश्यक भएमा यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छ मा लिखित छ। उद्योग द्वारा लोकप्रियता र गोद लेने को कारण, Redhat 2015 मा अननी खरीदा, र अब Redhat को पेशकश को आधिकारिक भाग हो। चिन्ता नगर्नुहोस् अनी अझै पनि नि: शुल्क र खुला स्रोत हो, Redhat थप बढ्दै छ, कोड योगदान र यो परियोजना बढ्दै। Redhat एक अनियमित टवर भनिन्छ जीटीआई प्लेटफर्म एक वेब प्रदान गर्दछ र मेरो भुक्तानीमा यो भुक्तानी र महंगा महंगी। त्यसो भए रेडिटले अननीमा पैसा कमाइरहेको छ। अज्ञात टवरले राम्रो विश्लेषण र रिपोर्टहरू, र CMDB / अन्वेरीको साथ केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रदान गर्दछ।
परिवर्तन व्यवस्थापनमा अज्ञात राम्रो छ, स्वचालन, प्रावधान र आर्किटेक्चर। यस उपकरणको साथ तपाईले तपाइँको सर्भरहरू साथै तपाईंको अनुप्रयोगहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब कुनै कैप्टि्र्रेनो, कपडे आदि जस्ता कुनै पनि अनुप्रयोग विशिष्ट परिनियोजन उपकरणहरू सिक्न आवश्यक छैन।
गुड़गांव मा अज्ञात प्रमाणन